शहीद को हुन् ? को होइनन् ?
१२ फाल्गुण २०७५, आइतवार | Feb 24, 2019 | 10:36:30
कमल साउद/उज्यालो ।
काठमाडौं, माघ १६ – हरेक वर्ष माघ १६ गते शहीद दिवस मनाइने गरिएको छ । दिवस हरेक वर्ष मनाइए पनि यो औपचारिकतामा सीमित छ । वर्षमा एक दिन शहीद दिवस मनाइने गरेको भए पनि देशले अहिलेसम्म शहीदको योगदानको कदर भने गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा २०१२ सालमा काठमाडौँ नगरलाई शहीद दिवस मनाउने आदेश भएदेखि काठमाडौँ नगरले शहीद दिवस मनाउँदै आएको छ । शहिद दिवसको दिनमा मात्रै शहीदलाई सम्झेर शहिदको योगदानको कदर हुने भने अवश्य होइन ।
शहीद भन्ने बित्तिकै हामी सबैले सम्झने गरेका छौँ, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठलाई । उहाँहरुले जहाँनिया राणा शासनको विरोध गर्दा आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभएको थियो । उकाँहरुकै सम्झनामा शहीद दिवस मनाइन्छ ।
यिनै शहीदहरुको सम्झनासहित दिवसमा नेपालका धेरै शहीदहरुको पनि स्मरण गर्ने गरिन्छ । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन र २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा सरकारी दमनमा मारिएका पनि शहीद हुन् ।
यस्तै कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेसवादी दललगायतले छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा मारिएकालाई पनि शहिद भन्ने गरिएको छ । धेरै शहीदको नाम राष्ट्रिय सूचीमासमेत परेको छ ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि शहीद घोषणा गरिएकाहरुको संख्या १ सय २७ रहेको छ ।
वास्तविक शहीद को हुन् ?
नेपाली बृहत शब्दकोष अनुसार आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षणका तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान दिएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति शहीद हुन् ।
तर अहिले शहीदका नाममा कुनै आन्दोलनका बेला घरमा बसेका व्यक्तिलाई गोली लागि मरेका वा कुनै निश्चित स्वार्थमा मारिएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गरिएको छ ।
गएको ७ गते मात्रै चितवनको बाँदरमुढे घटना र धनकुटाको छिन्ताङ काण्डमा मारिएका १ सय ९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको सरकारले सोमबार पनि थप केहिलाई शहीद घोषणा गरेको छ । जसमा माओवादी द्वन्द्वमा स्याङ्जामा मारिएका छन् ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला शहीदको मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको कार्यदलका संयोजक तथा लेखक मोदनाथ प्रश्रीतले आन्दोलनको बेला घरमा बसेका व्यक्ति पुलिसको गोली लागि मारिएका व्यक्ति शहीद नभई पीडित भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘समाज र राष्ट्रको हितको लागि बलिदान दिने मात्रै शहीद हुन् । अरु आन्दोलन तथा शसस्त्र द्वन्दमा मारिएका घरमा बसेका व्यक्ति शहीद नभइ पीडित हुन् । उहाँहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ, शहीद घोषणा होइन ।
अहिलेसम्म यी नै वास्तविक शहीद हुन् भन्नेमा विवाद छ तर राणाशासनको विरुद्धमा बलिदान दिने शहीद दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र गंगालालको हकमा भने शहीद हुन् भन्नेमा कुनै दुविधा छैन ।